Priscilla Chan – Facebook Mark Zuckerberg’s Girlfriend - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Why Burmese Aren’t The Richest People In The World
Next: Food Photography: Sukiyaki »
Myanmar Blog » WWW/News » Priscilla Chan – Facebook Mark Zuckerberg’s Girlfriend
Priscilla Chan – Facebook Mark Zuckerberg’s Girlfriend
မိတ္ထီလာမြို့နယ် ဇောင်းချမ်းကုန်းရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းအတွင်းမှာ ရေကန်ကြီးတစ်ကန် ရှိပါတယ်။ ရေကန်ထဲမှာလည်း ဇီဝိတဒါန လွှတ်ထားတဲ့ ငါးတွေက အများကြီးပဲပေါ့။ သိကြတဲ့အတိုင်း မိတ္ထီလာဆိုတာက မြန်မာပြည်ရဲ့ အပူပိုင်းဒေသတစ်ခု
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ ရိုးသားဖို့ကအဓိကပါ အဲလက်စ် ========================================= လူသန်းပေါင်းခြောက်ဆယ်ထဲ မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူ တစ် ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက တကယ်ကို မလွယ်လှတဲ့ကိစ္စရပ်ပါ။အောင်မြင် ကျော်ကြားသူတွေမှာ ဘယ်လိုကိုယ် ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ၊ သူတို့ကဘယ်လို
Si Thu Lwin and Nwe Mar Kyaw’s son
His nickname is Scotty.
Priscilla Chan isalucky woman because her boyfriend Mark Zuckerberg is one of the richest people in the world. Mark Zuckerberg, just at 26 years old, has $6.9 billion dollar to his fortune. Mark Zuckerberg has been dating Priscilla Chan since 2005.
Online Dating: Everyone is doing it!